122 → 131 of 1729 results First • Previous • Next • Last
. Latin - Vietnamese
. ပေါင်းစပ်မှု- လက်တင်; ဆလာဗစ်Cyrillic; ဟီဘရူး; အခြေခံအာရေဗျ
. ပေါင်းစပ်မှု- လက်တင်; ဆလာဗစ် Cyrillic; ဂရိ
. ပေါင်းစပ်မှု- လက်တင်; ဆလာဗစ် နှင့် ဆလာဗစ်မဟုတ်သည့် Cyrillic